Araga iyo maqalka - Trygg Trafikk
Syn og hørsel / Araga iyo maqalka
Araga iyo maqalka
Waxyaalahan ayaan arki karaa oo maqli karaa marka aan jidka marayo
Maqlayaa: Hoon-ka baaskeelka, Guuxa gaadiidka, codka gaadiidka gurmadka degdega, cagaf-cagafyada wax qoda, baabuurta xammuulka ee dib-dib u baxaysa, Saaxiibadayda ii dhawaaqaya, dadka waawayn ee wax ii sheegaya, codka ishaarada cagaaran ah ee jidka dadka u furta
Arkayaa: Calaamadaha gaadiidka haga, laydhka gaadiidka haga, Liitinta cad, dadka lugaynaya, baaskeeladaha, gawaadhida, basaska, baabuurta xammuulka, cagaf-cagafyada, mootooyinka. Jid-mareyaasha(trafikanter) xeerka jidka raacaya, jid-mareyaasha(trafikanten) jebinaya xeerka jidka, kursiga ciyaalka, suunka baabuurka, koofiyadda baaskeelka, aalada dhalaasha
Iminka waxa aad baranaysaa
In maqalku inna caawin karo haddii ay soo socdaan baabuur aynaan arkayn.
In aanay jid-mareyaasha(trafikanter) kala gedisani markasta isku si u fasiran xaaladda jidka
In aynu isticmaalo dhowr laxaad si aynu si ammaan ah ugu marno jidadka
Arkayaa oo maqlayaa
Waxa waddada qaybsanayaa maaha keli ah dadka lugaynaya, baaskeeled-wadeyaasha iyo dareewalada. Sawirkan waxa aad ka arki kartaa qaar jidka ka shaqaynaya, tusaale ahaan kuwo jidka dib-u-dhis ka wada. Waxa jira waxyaale badan oo loo baahan yahay in la tix-geliyo oo lala yimaado feejignaan badan.
Bal fiiri ciyaalka labada dhinacba ka taagan waddada halka laga talaabo. Kee/kuwee ayaa sida ugu fiican wax u arka? Miyaad halkaa ku aragtaa wax/waxyaalo halis noqon kara?
Arag oo dhegayso
Inkasta oo aanad arkayn hadana waxa laga yaabaa in baabuuri kugu soo wajahantahay. Waxa laga yaabaa in baabuurta ay kaaga gudbanyihiin taagooyin, cuf iyo dhir, laabatooyin iyo guryo. Taas macnaheedu waa, in baabuurtaa cidda wadaa iyaguna aanay markasta ku arkayn adiga. Markaa waa in aad maashid maqalkaaga oo aad dhegaysatid guuxa hijiinka. Miyaad maqlikartaa in uu baaskeel soo socdo?
Meesha aan waxba laga arkikarin(blindsone)
Baabuurkastaa waxa uu leeyahay aag/meel aanu dareewalku waxba ka arkikarin. Aagaa waxa loo yaqaanaa meesha aan waxba laga arkin(blindsone).
Haddii aad maraysid aaga aan waxba laga arag, macnaheedu waa in aanu dareewalkaasi ku arkaynin. Aaga aan waxba laga aragi (blindsonen) baabuurta waawayn wuu ka balaadhanyahay inta baabuurta yar-yar. Aad u taxadir marka aad maraysid barxadaha baabuurta la dhigto(parkeringsplasser) iyo marka aad jidka ka talaabaysidba.
Xidhiidka xagga indhaha(Øyekontakt)
Xasuusnow, in aanad abid jidka ka talaabin adiga oo hubsada in dareewalku ku arkay mooyaane. Tijaabi in aad dareewalka indhaha isla heshaan, sidoo kalena la soco in baabuurku uu dhimayo xawaaraha oo uu istaagayo. Iska fiiri bidixda iyo midigtaba oo sug inta uu baabuurku istaagayo ka hor inta aanad jidka ka talaabin.
Inta badan gaadiidku waxa uu sameeyaa codad badan oo dhaadheer. Waxa laga yaabaa in ay adagtahay in la ogaado codku xagga uu ka imanayo iyo weliba kee ayaa samaynaya cod-kee? Markasta oo aad laxaaddo badan hal mar wada isticmaashid, jid maristaadu waa ka fiicnaanaysaa
In ambalaaska, booliska ama gaadiidka dab-demisku ay isticmaalaan laydh buluug ah oo bilig-bilig leh marka ay hawl deg-deg ah ku gudo jiraan. Waxa kale oo ay intaa ku dari karaan cod-ka gaadiidka gurmadka deg-dega, laakiin waxa ay cod-kaa adeegsan karaan keli ah marka ay noqoto lagama maarmaan. Sababta ay caynkaa u tahay, maxaad u ma laynaysaa?
Banaanka ka samee
Banaanka isu raaca, doorta saddex goobood oo kala geddisan oo ah jidka dhiniciisa.
Goobahaas tee ayaa ugu fudud in dareewalku adiga kaa arko?
Goobtee ayaa ugu adag in adiga lagu arko?
Waa maxay sababta ay u adagtahay in adiga lagu arko marka aad goobtaa joogtid?
Istaag saddexdaa goobood mid ka mid ah. Indhaha isku qabo oo dhegayso guuxa baabuurta. Ma kala sooci kartaa guuxa baabuurta, kuwa kuu soo dhawaanaya iyo kuwa kaa sii fogaanaya?
Gudaha ka samee
Sawir oo qor dhamman wixii gaadiid ah ee aad aragtid ama maqashid. Sawir maalin caadi ah oo aad iskuulka ku sii socotid.
Tusaaleyaal maka bixin kartaa xaalado aad jidka maraysid oo loo baahan yahay in laxaadada araga iyo maqalka-ba aad si fiican u isticmaashid?
Qaabkee ayaad u adeegsanaysaa aragtida indhaha marka aad jidka ka talaabaysid?
Waa maxay meesha aanu dareewalku kaa arki karini(blindsone)?